“Efa nanampy mihoatra noho ny 2,700 CPA kandidà mizara ny fanadinana andrana eo amin'ny voalohany.”
Ahoana no mizara ny CPA Exam amin'ny Miezaha Voalohany!
(Like izaho dia)
1. Tadiavo ny CPA Fepetra ho an 'ny Fanjakana
Hanomboka, zava-dehibe ny mahita izay tokony hipetraka ny CPA fanadinana. Zahao hoe ny toetrareo CPA fepetra takiana to learn what you need before you can take the test.
2. Hisoratra anarana amin'ny CPA Exam
Rehefa efa natao antoka fa afaka mipetraka ho an'ny fanadinana, tonga ny fotoana ho anao ny hisoratra anarana ho an'ny fanadinana CPA.
3. Tadiavo ny tsara indrindra CPA Review Course Fa ianareo
Roger CPA Review is my top pick for 2018. Ny lahateny hanintona indrindra ao amin'ny orinasa, dia tsy mahagaga raha maro ny mpianatra hijanona miasa mafy sy mianatra ny fepetra takina vaovao tanteraka ny CPA fanadinana.
Jereo ny feno famerenana Roger CPA Review eto.
Wiley CPAexcel no iray amin'ireo anarana itokisana indrindra ao amin'ny orinasa elaela. Noho ny fanontaniana goavana banky sy intuitive anaty fiara, Wiley Prep ny CPA Mazava ho azy fa maro no mampiasa ny kandidà fanadinana-nitranga.
Jereo ny feno famerenana Wiley CPAexcel eto.
Surgent manome iray amin'ireo tsara indrindra CPA famerenana taranja eny an-tsena. Noho ny mpampianatra za-draharaha indrindra ao amin'ny orinasa, adaptive lehibe teknolojia, ary tsy manam-paharoa sy ny fanohanana Subscribe to, Surgent CPA hevitra lehibe fitaovana mandalo ny fanadinana voalohany ny manodidina.
Jereo ny feno famerenana Surgent CPA famerenana eto.
Raha toa ianao izay liana Mazava ho azy fa mety ho tsara indrindra ho anao, doha eo eo ny CPA tsara indrindra taranja famerenana fampitahana pejy.
CPA hafa Course Reviews:
5. Vonjeo Big amin'ny Exclusive CPA PROMO Codes & fihenam-bidy
Aza mandoa vola tokom-bidiny ho an'ny akory va ny ambony famerenana taranja CPA! Efa nanangona ny CPA tsara indrindra PROMO kaody ary ny tapakila avy amin'ny rehetra ny laharana ambony CPA fanadinana Prep orinasa eto ambany mba hanampy hamonjy anao vola.
Hahazo ny tsara indrindra CPA fihenam-bidy eto:
6. Omano ny Fianarana CPA Fandaharana
Rehefa ianao mianatra ny CPA fanadinana, Izany dia midika hoe mandeha ho sarotra ny mifidy ny fizarana voalohany fa handeha ianao-nitranga. Noho izany, eo anatrehanao hanolo-tena handray ny sarotra indrindra aloha, angamba hojerentsika ny lahatsoratra izay milaza anao izay CPA fizarana haka aloha. I manarona ny zavatra rehetra ve ianao te-hahafantatra momba ny dingana rehetra, tany amin'ny oniversite ny fanamarinana amin'ny CPA boky fandalinana.
Tonga soa hanorotoro ny CPA!
Porofo aho fa eo ho eo kaonty dia afaka mizara ny CPA fanadinana ny voalohany manodidina. Nanomboka apotrahy ny hizara ny tantara ary hanampy anao hahita ny tsara indrindra fitaovana fianarana ho an'ny CPA dia. Tiako ho ianarana avy ny zava-nitranga, tsy ny fahadisoana nataoko, sy mifidy ny Mazava ho azy fa marina CPA famerenana noho ny fomba fianarana.
Tsy voatery hanaisotra ny fiainana ara-tsosialy, na hivarotra ny fanahinao tanteraka ny CPA fanadinana. Afaka nanapaka ny ankapobeny CPA Prep fotoana tapany alalan 'ny fanesorana tsy misy ilana azy sy ny fomba fandalinana mahafantapantatra hoe ny fitaovana izay nanampy ahy hianatra. Noho izany, Aoka ny mankanesa teo amin'ny ankavanana, ary lalana mankany Miha-manakaiky kokoa ny CPA akaikin'ny fanendrena ny anaranao.
Aoka Me Hanampy Anao mizara ny CPA Exam!
Ampitahao The Best CPA Review Courses
Hianatra ny fomba tanteraka ny Exam eo Amin'ny Miezaha Voalohany
Get CPA Discounts sy ny PROMO Codes
Ny CPA Exam Pass Rate dia Just 49%
Ny mifanohitra-nitranga dia ambany toy izany, satria ny ankamaroan'ny CPA kandidà tsy manana ny fahalalana sy ny loharanon-karena ho araka ny tokony ho drafitra, fianarana, ary laharam-pahamehana.
Hanorotoro eto mba hahazoana antoka fa ampy fitaovana tsara amin'ny zava-drehetra tokony nitranga fizarana efatra ny CPA fanadinana ny fotoana voalohany amin'ny alalan'ny. Andeha isika hanomboka!
Jereo ny resakin'ny olona
"Bryce Tena mahay sy manampy amin'ny fanapahan-kevitra izay CPA Mazava ho azy fa mety ho tena soa. Izy koa nanome ahy toro-hevitra mahasoa sy hamantatra izany mba hahatonga ny fahazarantsika mianatra Baiboly mahomby kokoa. "
kilaometatra Penava (CPA Candidate)
"Dia manifakifa ny CPA nanana ny fanazavana rehetra nilaiko ny manomboka ny traikefa nahafinaritra CPA amin'ny toerana iray. Misaotra betsaka noho ny fianarana toro-hevitra Bryce. Tena mahalala ny amin'ny fanakareo! Handeha aho hanorotoro ny CPA Exam Ankehitriny!"
“The study tips that Bryce provides have made my CPA exam experience much less stressful and helped me pass my first two sections already. Tena aho handeha hanorotoro CPA ity fanadinana!"
Tena mahazatra Fanontaniana Momba ny CPA
Nahoana aho no lasa CPA?
The soa ny ho CPA dia na azo tsapain-tanana sy intangible. Dia akaikin'ny fanendrena ny anaranao, no hahazo asa tsara kokoa leha, ambony karama, fanajana avy amin'ny mpiara-mianatra koa deraina, ary ny mety mba hahazoana toerana zorony birao. Nandritra ny Mazava ho azy fa ny asa, CPAs manao $1 tapitrisa mahery ireo tsy nahazo fankatoavana mitovy. The C-Suite is more likely to be made up of people who are CPAs than those who lack the title—executive search firm Spencer Stuart noted roughly 45 isan-jato ny CFOs manana CPA.
Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny fanadinana CPA fanjakana?
The fepetra takiana mba mipetraka ho an'ny fanadinana CPA tsy tena samihafa avy amin'ny fanjakana mba milaza, fa misy tokoa ny sasany outliers. Ny fahatakarana ireo CPA fanadinana fepetra ilaina, na izany aza, toy ny dingana voalohany amin'ny fahatongavana ho CPA dia hoe afaka mipetraka ho an'ny fanadinana. Amin'ny ankapobeny, ianao handeha mila 150 bola ora ny fitantanam-bola ny fanabeazana, miaraka amin'ny asa sasany traikefa. Misy tena bebe kokoa ny zavatra takiana fotsiny 150 bola ora, fa ianao handeha manana fa ho toy ny fototra fanabeazana fototra mba mipetraka ho an'ny fanadinana.
Ahoana no fomba hampiharana ny CPA fanadinana?
Fampiharana ny CPA fanadinana dia dingana sarotra, indrindra nomena famerana ny daty sy ny maro ny zavatra takiana. Ny fahatakarana ny fomba hampiharana dia hanampy amin'ny fandaharam-potoana sy ny fotoana fitantanana, ka ho azo antoka no handrakotra ny fitoeran-tavin rehetra. Ny fototra dingana fampiharana transcripts tafiditra an-tsekoly, ny saran'ny fandefasana sy ny fampiharana, mandray ny ATT avy amin'ny fanjakana board, getting your NTS from NASBA, fandehanana any amin'ny Prometric vohikala mba fandaharam-potoana ny fanadinana daty, ary avy eo mianatra sy nandray farany ny fitsapana. Ny dingana fampiharana CPA fanadinana dia tena voafaritra tsara, ary mety ho mampisafotofoto, ka ho azo antoka ianao hanaraka tsipiriany tsara ny T.
Ahoana no nahatonga ny olona mijanona rehefa mahomby ny CPA fizarana fanadinana?
Nahita ny antony manosika mba hanohy amin'ny fandalinana taorian'ny fitsapana dia tsy mahavaky fo ho an'ny olona maro. Na izany aza, raha afaka manao ny oha-hazavana any amin'ny faran'ny tionelina iray azo tsapain-tanana ny tanjona na zava-nitranga, dia hanamaivana ny dingan'ny fanombohana. Maro ny olona tsy iray, fara fahakeliny, fizarana, noho izany dia azo antoka fa azo atao ny mianatra foana raha hoe nahoana ianao maka ny fitsapana. Tsy nahomby ny fizarana tsy midika ihany koa ianao avy koa aza mitetika ny ho lasa CPA-maro ny olona izay hipetraka zorony biraon'ny Fortune 500 orinasa iray dia tsy fizarana ny fanadinana. Ny zava-dehibe mikasika ny fahadisoana dia mba hahazoana antoka tsy hanao fahadisoana mitovy indroa.
Ahoana no manaiky ny "fomba fianarana"?
ny fahafantarana ny fomba fianarana dia ny fanalahidin 'ny fanapahana sy ny ora ora eny ny fotoana fianarana. Rehefa fantatrao izay miasa manokana momba ny karazana fitaovana Prep-horonan-tsary, teny afa-po, na manao raha manao fitsapana amin'ny alalan'ny banky na ny boky-ny dingana rehetra ary samy lasa mora kokoa ny mianatra minitra lasa sarobidy kokoa. Raha ianao izay manontany tena ny fomba fianarana dia, Izaho dia manoro hevitra anao hijery tsara ilay lahatsoratra etsy ambony sy mamaritra tsara ny fomba dingana sy handevona vaovao. Nefa tsy fantany ny fomba tsara indrindra eo anoloanareo mianatra mampiasa vola amin'ny CPA famerenana ankapobeny Mazava ho azy fa dia mirehitra-bola!
Inona avy ireo varavarankely fitsirihana isan-karazany ho an'ny CPA fanadinana?
Ny fitsapana rava ho any amin'ny isan-telo volana ketra fandaharam-potoana eo amin'ny raharaham-barotra, izay rehetra miantehitra. Noho izany, fa ny lafiny voalohany, no mahazo mandray ny fitsapana voalohany ao anatin'ny roa volana sy folo andro fanampiny ny faharoa volana. Indray mandeha ity fitiliana varavarankely Tapitra, ny fandaharam-potoana mamerina fotsiny izany modely. Raha tsorina dia, misy 20-nankany andro isan-telovolana fe-potoana izay tsy afaka mandray ny fitsapana. Raha toa ianao afaka drafitra ny fianarana sy ny fandaharam-potoana tsara ny fanadinana, ianao ho afaka mandondòna ny CPA tamin'ny mitovitovy isan-taona!
Ahoana no fomba fianarana mamorona ny fandaharam-potoana?
Famoronana CPA fanadinana fianarana fandaharam-potoana dia miankina aminao manao ny marina ny fomba fanombanana ny ora maro dia afaka manokana isan-kerinandro. Raha miasa ianao manontolo andro, ianao te-handeha hianatra iray isan'andro vola, somary intsony amin'ny fivoriana eo amin'ny faran'ny herinandro. Raha tsy miasa ianao, dia afaka manokana fotoana midadasika isan'andro-ny fanalahidy dia ny mitandrina ny fari-mianatra tsy tapaka, Toy ny tsy te-hanao be loatra tamin'ny indray andro ary tsy eo amin'ny olon-kafa. Ny fahafantarana ny fomba fianarana ho an'ny fanadinana ny CPA no ho samy hafa ny fandaniana sy fahalementsika ny fizarana tsirairay.
Iza amin'ireo fizarana ny CPA fanadinana no hitondra aloha?
ny CPA voalohany fanadinana fizarana dia tokony ho ilay iray izay tsapanao momba ny tena matoky mandalo. Jereo ny lahatsary eto ambany mba hahitana ny antony!